Kor u qaadista xad -dhaafka ah ee khidmadaha garoomada diyaaradaha ayaa joojin doonta soo -kabashada safarka hawada
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airport » Kor u qaadista xad -dhaafka ah ee khidmadaha garoomada diyaaradaha ayaa joojin doonta soo -kabashada safarka hawada
Airlines • Airport • Wararka Ururada • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Kharashka kaabayaasha dhaqaalaha oo sii kordhaya $ 2.3 bilyan inta lagu jiro xiisadda waa mid laga caroodo, ayay tiri IATA.
Kordhinta qorshaysan ee khidmadaha garoomada diyaaradaha iyo bixiyeyaasha adeegga hagista hawada (ANSPs) waxay dhaawici doontaa isku xirnaanta caalamiga ah.
Madaarka la xaqiijiyay iyo kororka ANSP ayaa durba gaaray $ 2.3 bilyan.
Wadajir ahaan, ANSP -yada 29 -ka gobol ee Eurocontrol waxay raadinayaan inay ka soo ceshadaan ku dhawaad ​​$ 9.3 bilyan (billion 8 bilyan) shirkadaha diyaaradaha si loo daboolo dakhliyada aan la gaarin 2020/2021.
The Ururka Caalamiga ee Gaadiidka Cirka (IATA) wuxuu ka digay in kororka qorshaysan ee khidmadaha garoomada diyaaradaha iyo bixiyeyaasha adeegga hawo -mareenka (ANSPs) ay joojin doonaan soo -kabashada safarka hawada ayna dhaawici doonaan isku xirnaanta caalamiga ah.
Madaarka la xaqiijiyay iyo kororka ANSP ayaa durba gaaray $ 2.3 bilyan. Korodhka dheeraadka ah wuxuu noqon karaa toban laab lambarkan haddii soo jeedimaha hore u soo gudbiyeen garoomada diyaaradaha iyo ANSPs la oggolaado.
“$ 2.3 bilyan oo doollar oo la kordhiyo inta lagu jiro xiisaddan waa mid laga caroodo. Dhammaanteen waxaan rabnaa inaan dib u dhigno COVID-19. Laakiin dhigidda culeyska maaliyadeed ee qalalaasaha saami -qaybsiga dhabar -weynaha macaamiishaada, maxaa yeelay waxaad awooddaa, waa istaraatijiyad ganacsi oo keli -talis kaliya ku riyoon karo. Ugu yaraan, dhimista kharashaadka - ma aha kordhinta qarashka - waa inay ahaataa ajandaha ugu sarreeya ee madaar kasta iyo ANSP. Waxaa loogu talagalay shirkadaha duulimaadyada macaamiishooda, ”ayuu yiri Willie Walsh, Agaasimaha Guud ee IATA.
Tusaale waxaa laga helaa bixiyeyaasha adeegga hagista hawada ee Yurub. Wadajir ahaan, ANSPs ee 29 -ka gobol ee Eurocontrol, oo badankoodu ay dawladdu leedahay, waxay raadinayaan inay ka soo ceshadaan ku dhawaad ​​$ 9.3 bilyan (€ 8 bilyan) shirkadaha diyaaradaha si ay u daboolaan dakhliyada aan la gaarin 2020/2021. Waxay rabaan inay tan u sameeyaan si ay u soo ceshadaan dakhliga iyo faa'iidooyinkii ay lumiyeen markii shirkadaha duullimaadyadu awoodi waayeen inay duulaan intii lagu jiray aafada. Waxaa intaa dheer, waxay rabaan inay tan sameeyaan marka lagu daro koror 40% ah oo la qorsheeyey 2022 oo keliya.
Tusaalooyinka kale waxaa ka mid ah:
Madaarka Heathrow wuxuu riixayaa inuu kordhiyo khidmadaha in ka badan 90% sanadka 2022.
Gegida Diyaaradaha ee Amsterdam Schiphol oo codsanaysa in lagu kordhiyo khidmadaha 40% saddexda sano ee soo socota.
Shirkadda Garoomada Diyaaradaha ee Koonfur Afrika (ACSA) waxay codsanaysaa inay kordhiso 38% khidmadaha sannadka 2022 -ka.
NavCanada waxay kordhineysaa khidmadaha 30% muddo shan sano ah.
ANSP -da Itoobiya ayaa kor u qaadday 35% sannadka 2021 -ka